Ekike ejiji nke Venezuela | Akụkọ njem
Ejiji ndị Venezuelan na -ahụkarị
Mariela Carril | | omenala, Venezuela
Obodo ọ bụla ma ọ bụ mpaghara ọ bụla n'ime obodo nwere ahụkarị uwe, uwe ọdịnala nke jikọtara akụkọ ọdịbendị ha, ya bụ, ngosipụta ọdịbendị nke, n'ezie, gụnyekwara akụkọ na akụkọ mgbe ochie, egwu, omenala ihe, ọdịnala ọnụ.
Akụkọ ihe mere eme, ọdịdị ala, agbụrụ ma ọ bụ ihu igwe na -emetụta ụdị ejiji ndị ahụ. Taa, anyị na -aga South America ịjụ onwe anyị, Gịnị bụ ejiji ndị Venezuela?
2 Uwe ejiji nke Venezuela
La Bolivaria Republic of Venezuela Ọ bụ otu n'ime mba mebere South America, nke nwere mpaghara kọntinent na obere akụkụ na -adịghị ahụkebe, na Oke Osimiri Caribbean na Oke Osimiri Atlantic. Ọ dị na Kolombia, Brazil na Guyana.
Territorykèala nke Venezuela bi taa Ọ bụ Spain chịrị ya site na 1522, na mmegide siri ike site n'aka ndị Amerindian. Mana na 1811 ọ bụ otu n'ime obodo mbụ na -ekwu na ya nwere onwe ya, ihe ọ ga -eme n'ezie na 1821. Afọ ole na ole ka e mesịrị, ọ kewapụrụ ruo mgbe ebighi ebi site na mpaghara a maara dị ka Gran Colombia na site na mgbe ahụ gaa n'ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke ọha dị iche iche sochiri, ụdị ndị ahụ na mpaghara a ga -ahazi.
Ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị agbaala narị afọ nke 90, 'XNUMXs hụrụ nnwale nnwere onwe, gọọmentị neoliberal nke Carlos Andrés Pérez na mpụta nke ọnụ ọgụgụ ahụ. Hugo Chávez aka na aka a na-akpọ Mgbanwe Bolivarian. Eziokwu ahụ bụ na mba ahụ nwere otu nnukwu mmanụ mmanụ n'ụwa na -etinye ya mgbe niile n'etiti akụkọ na nrụgide sitere na United States na ndị ha na ya jikọrọ aka, na -ebute ọgba aghara ọha na eze.
Uwe ejiji nke Venezuela
Dị ka Latin America n'ozuzu, ebe a ihe niile bụ agba, mana n'eziokwu, n'agbanyeghị na anyị nwere ike ikwu maka a ejiji pụrụ iche, eziokwu bụ na uwe Ọ nwere ọdịiche dịka mpaghara mpaghara obodo a si dị. Venezuela nwere mpaghara ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị itoolu, Andes, Isi Obodo, mpaghara etiti, Llanos, Central-Western, Zuliana, Northeast, Guyana na Insular.
Mpaghara nke ọ bụla nwere mgbanwe nke ya, ọ gwụla ma enwere ọtụtụ ọnụnọ ụmụ amaala, mgbe ahụ a ga -aka akara ọdịiche dị iche iche karịa. Mgbe ahụ, Uwe ejiji nke Venezuela bụ liqui liqui.
N'ime mmadụ, liqui liqui mejupụtara a jaket ogologo aka, olu mkpuchi mechiri emechi na ogologo na ogologo. O nwere akpa n'akpa na n'okpuru, na ala, wee mechie n'etiti bọtịnụ ise na isii n'ihu.
Uwe ọkpa kwụ ọtọ, nke ejiri otu akwa dị ka jaket elu, nke mere na ọ na -abụkarị linen. Agba kachasị agba bụ ọcha na oji, ọ bụkwa uwe a na -ahụkarị nke ụmụ nwoke na -eji n'ọhịa ma ọ bụ, onye na -ehicha ihe, na nzukọ a na -eme. N'elu isi ha, ndị nwoke yi a okpu ojii nke a maara dị ka "pelo e 'guama", na akpụkpọ ụkwụ ndị ahụ bụ akpụkpọ ụkwụ ojii.
Agbanyeghị na liqui liqui bụ uwe nwoke mana ọ na -ewu ewu nke ukwuu enwere ụdị nwanyị, ejighịzi uwe ogologo ọkpa kama ọ bụ uwe mwụda nke ogologo dị iche iche. Ee, mgbe ụfọdụ ụmụ nwanyị na -eyikwa okpu ma ọ bụrụ na ọ bụghị ndokwa ifuru. Ma ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka ya ụdị ejiji Venezuela maka ụmụ nwanyị ka anyị na -ekwu maka uwe: a yi uwe, ifuru ifuru iberibe abụọ.
N'elu ụlọ ụmụ nwanyị na -ebu a Agba e biri ebi ma ọ bụ nke siri ike, uwe aka dị mkpụmkpụ, uwe elu olu na-emeghe na obosara, na uwe mwụda yiri ya, nke na -erute na nkwonkwo ụkwụ ma ọ bụ n'ikpere. Ọ dabere na mpaghara mba ahụ. Ụmụ nwanyị na -ebu n'ụkwụ ha ị see okwu, akpụkpọ ụkwụ nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na -eyikarị, ma ọ bụ espadrilles. Mgbe ụfọdụ a na -ejikwa akpụkpọ ụkwụ nwere ikiri ụkwụ sara mbara ma ọ bụ ọkara. N'isi, ụta na -ejide ntutu anakọtara.
Anyị kwuru na mbụ na Venezuela nwere ọtụtụ mpaghara. A) Ee, na mpaghara isi obodo, Caracas na steeti Vargas na Miranda, ebe ọnụ ọgụgụ buru ibu sitere na ndị ọbịa Spanish na ndị ohu ojii, ejiji na -ewere ụdị ndị ọzọ.
Na Isi Obodo, ụmụ nwanyị na -eyi uwe ọdịnala "Ochie nwanyị", nwanyị mara mma nke nwere uwe mwụda ogologo na obosara, n'ụdị ndị Europe, yana akwa mara mma, lace, silk. N'okpuru bụ a crinoline ígwè ma ọ bụ akwa akwa petticoats nke na -enye efe na olu na uwe. N'isi, okpu, na aka, uwe aka na nche anwụ siri ike na nke nwanyị.
N'aka nke ha, ụmụ nwoke na-eyi jaketị na traụza nke a na-ejikarị akwa linin ma ọ bụ owu na-acha ọkụ. N'oge ndị ọzọ ha na -eyi bowtie ma ọ bụ tie na okpu ahịhịa, mgbe ụfọdụ mkpisi.
Ka anyị na -apụ na isi obodo ọdịnala ndị ahụ adịchaghị mma a na -ahụkwa nke ahụ na ọdịiche nke ejiji na -ahụkarị. Dịka ọmụmaatụ, na Miranda, ụmụ nwanyị na -eyi uwe mwụda sara mbara ruo n'ikpere ha, na -ebipụta ifuru, uwe mwụda gbara agba na ubu na -enweghị isi na mkpuchi isi nwere agba. Nwoke a setịpụrụ jaket khaki na traụza, tụkọtara.
Na Vargas, mpaghara etiti ụsọ mmiri, ebe a na -eji ya egwu egwu, a na -eme ka uwe nwanyị dabara mkpa ha ịkwaga ogwe aka na ịgba egwu nke ọma. Mgbe ahụ, a na -eke uwe elu nwanyị n'úkwù, uwe mwụda ahụ efunahụ ụgbọ elu ya. N'akụkụ nke ha, ụmụ nwoke ahụ na -eyi uwe elu na -acha ọcha ma ha niile na -aga ụkwụ efu.
Na Mpaghara Los Llanos, kedu steeti Guárico, Barinas na Apure, uwe nke llanero na -achị, na -ewu ewu na mba niile. Ya bụ, Ọ bụ ala nke liqui liqui site n'ịdị mma. Styledị na ihe ịchọ mma na -adịgasị iche dabere na emume a, yabụ na ha nwere ike ịdị mfe ma ọ bụ karịa edozi edozi.
Steeti Mérida, Táchira na Trujillo mejupụtara Mpaghara Andean, nwere ihu igwe oyi. Ya mere ụmụ nwanyị na -ebu ogologo, uwe mwụda juputara na petticoats na -ekpo ọkụ, ọkachasị oji. Uwe elu ahụ na -acha ọcha, nwere aka uwe ogologo, na n'elu ha na -eyi akwa linin ma ọ bụ akwa owu. N'isi isi ịchafụ na n'elu ya okpu na nke ọzọ ma ọ bụrụ na ha na -arụ ọrụ n'ubi.
Uwe ejiji nwoke nke mpaghara Andean nwere akwa ma ọ bụ owu, ude ma ọ bụ traụza na jaket, nwere akwa raw atụrụ owu ruana iji chebe onwe gị pụọ na oyi. Espadrilles n'ụkwụ na okpu ahịhịa n'isi, akwa akpụkpọ anụ sara mbara nke nwere akpa, dị mma maka ịchekwa ego na ịcha mma na akpa. Ihe niile bara uru.
Na steeti Zulia, uwe a na -eyikarị nwere mgbọrọgwụ nke ụmụ amaala nke weghaara ma ka nọkwa na mpaghara Guajira, n'akụkụ abụọ nke ihe osise ahụ na Colombia. Uwe ụmụ nwanyị bụ blanket guajira, ụdị uwe mwụda kwụ ọtọ na obosara, na agba na ụkpụrụ dị egwu. Mgbe ụfọdụ olu na-agba gburugburu, mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka V, mana n'agbanyeghị nkọwa ahụ, ha niile nwere eriri eriri n'úkwù.
N'elu ụkwụ ha, ụmụ nwanyị Zulia na -eyi akpụkpọ ụkwụ e ji chọọ ya mma bọọlụ ajị anụ nwere ọtụtụ agbaEe, otu ihe ahụ bụ akpa aka ogologo ma ọ bụ mpe mpe akwa dị na ntutu, na-ekpuchi akụkụ nke ọkpọiso. Ha na -eyikarị ihe olu, ihe ịchọ mma ezinụlọ nke e ketara n'etiti ụmụ nwanyị ezinụlọ. Na ndị ikom?
Ekike nwoke abụghị nke na -egbu maramara kama ọ dị nfe: ha na -eyi a ihe mkpuchi iji kpuchie akụkụ ahụ na teepu nke na -ejide ya, ị na -ese bọọlụ ndị tụrụ àgwà. Ha anaghị eyi uwe elu wee soro ya gaa toro ọtọ ọ bụ ezie na ruo oge ụfọdụ ugbu a, ụfọdụ na -eyi flannel ọcha. Ha na -ebukwa akpa a kpara akpa iji chekwaa nri na mma. N'isi okpu nwere mmetụta na n'ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ dị mfe. Ọ bụrụ na mmemme ahụ bụ emume, ha nwere ike iyi akwa mmiri.
Gịnị banyere agwaetiti ndị a? Kedu uwe ejiji Venezuela na mpaghara agwaetiti ahụ? Ụmụ nwanyị na -eyi a jiri akwa mwụda na ruffles sara mbara, n'ala. Ha bụ iberibe akwa asaa nwere agba, mgbe ụfọdụ ifuru ifuru, nke ejiri akwa lace ma ọ bụ satin rie ya otu otu. Uwe elu bụ uwe aka 3/4 nke nwere ọtụtụ mpe mpe akwa dị ka ihe ịchọ mma, bọtịnụ n'otu agba dị ka uwe mwụda na olu dị elu. Njikọ ndị ọzọ dị na ntutu isi ya.
Maka akụkụ ya ndị nwoke nwere ogologo ọkpa ruo ikpere, na uwe elu nwere otu agba ma ọ bụ ọbara ọbara, na -enweghị olu. Mgbe ụfọdụ uwe ogologo ọkpa nwere ike ịbụ oji ma ọ bụ khaki. Ejiri ahịhịa mee okpu ahụ ma ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na -eyi espadrilles na naanị otu.
Na Guyana, mpaghara mebere steeti Delta Amacuro, Bolívar na Amazonas, uwe nwanyị bụ a uwe mwụda nke ọtụtụ agba na ifuru, n'etiti ụkwụ, ya na uwe elu nwanyị na-acha ọcha, olu na eriri. N'aka nke ha, ụmụ nwoke ahụ na -eyi traụza ọcha na uwe elu nwere agba olu olu kwa. Ndị ikom nke ebo ụfọdụ na-agba ụkwụ ọtọ.
Steeti Yaracuy, Portuguesa, Falcón na Lara mejupụtara Mpaghara Central Western, ma Ha enweghị otu ụdị ejiji mana ha nwere ọtụtụ dị ka steeti nke ọ bụla nwere akụkọ siri ike na nke onwe ya. N'ọnọdụ ọ bụla, a na -emegharị ogologo ọkpa khaki, uwe mwụda okooko osisi, uwe elu nwanyị nwere agba, okpu (mgbe ụfọdụ ahịhịa, mgbe ụfọdụ okpete). Uwe mmanya mmanya na -apụta ọbụna na Yaracuy.
Otu ihe ahụ na -eme, n'ikpeazụ, na Mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ na mpaghara etiti. Ikekwe ndị Venezuelan n'onwe ha ga -amata ọdịiche dị iche iche, mana na -ekwukarị, dịka ị ga -ahụ, ụdị ejiji Venezuela jupụtara na agba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Venezuela » Ejiji ndị Venezuelan na -ahụkarị
Ejiji ndị Nicaraguan
Obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa